२०१९ मा मीन राशि भएका व्यक्तिको भविष्य कस्तो ? (हेर्नुस् भिडियोमा), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
२०१९ मा मीन राशि भएका व्यक्तिको भविष्य कस्तो ? (हेर्नुस् भिडियोमा)
काठमाडौँ। ज्योतिष भनेको सूर्यमण्डल रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरङ्गलाई सूक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो। त्यसैले २०१९ मा मीन राशि हुनेहरूको भविष्य कस्तो भनेर जान्नका लागी हेर्नुहोस् आजको यो भिडियो ।
मीन राशि हुनेहरूले यो वर्ष विभिन्न आयामहरू झेल्नु पर्नेछ । त्यसैगरी कठिनाइको योग बढी भएको हुनाले तपाईँहरुले यो वर्ष मानसिक रुपमा सतर्कता र सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ कुनै पनि समस्या समाधानका लागि ।
मीन राशि हुनेहरुले यो वर्षमा समस्याहरू झेल्नको लागि मानसिक र आत्मिक रुपमा तयार रहनु पर्नेछ । यो वर्ष मानसिक र आत्मिक रुपमा बलियो रही कडा मेहेनत गरेमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नसक्नुहुनेछ नभए यो वर्ष कार्य सफल गर्न धेरै धैर्य धारण गनुपर्नेछ । काममा अपजस पाउने, गरेको काममा मेहेनत अनुसारको फल प्राप्त नहुने साथै स्वास्थ्यमा पनि थोरै आलस्यता यो वर्ष देखिएको छ ।
पूरा जानकारीको लागि हेर्नुस् केन्द्रबिन्दुको यो भिडियो...